सडक अवरुद्ध गरे ३ वर्षसम्म कैद !
काठमाडौँ, १५ साउन । सामान्य घरझगडा हुँदा पनि सडक बन्द गर्ने र यात्रुलाई दुःख दिने पुरानै चलन हो, तर अब भदौ १ गतेबाट भने यस्तो गर्ने वा गराउनेलाई ३ वर्ष कैद ...
काठमाडौं, १८ साउन । सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको विषयमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा प्रतिपक्षी कांग्रेसले अल्झाइरहे उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन पार्टीभित्र लबिइङ गरेका छन् । संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक पटक ...
काठमाडौं, १८ साउन । बिमा कम्पनी खारेजीमा जाँदा सुरुमा विमित (ग्राहक) ले भुक्तानी पाउने सुविधा खोसिन लागेको छ । प्रस्तावित बिमा ऐनको विधेयकमा बिमितभन्दा अघि सरकार, बिमा समिति (प्रस्तावित बिमा प्राधिकरण) लगायतले ...
काठमाडौं, २७ वैशाख । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आफूसँग बाँकी रहेको दोस्रो र एकमात्र बोइङ जहाज पनि बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । दुईमध्ये पहिलो बोइङ यसअघि नै उसले बेचिसकेको ...
कुलतमा फस्दै विदेशिएका युवा !
काठमाडौं, २७ वैशाख । राजधानीमा बसिरहेका उज्ज्वल प्लस टु पास गरेपछि परिवारसँगै अस्ट्रेलिया गए । उनी मेलबर्नमा बस्न थाले, परिवार अर्कै राज्यमा । ८ कक्षा पढदै मदिरा पिउन सिकेका थिए । अस्ट्रेलिया गएपछि ...
ठाकुर बिरामी भएपछि पार्टी नै सुनसान
काठमाडौं, २७ वैशाख। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर बिरामी हुँदा राजपामा सुनसान देखिएको छ । पार्टीका गतिविधि शून्य झैं भएका छन् । गत वैशाख ८ गते बस्ने भनिएको ...
काठमाडौँ, २७ वैशाख । प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ईश्वर देखाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबार सरकारले पेश गरेका तीन वटा अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पेश ...
मोदीलाई ‘जेड’ तहको सुरक्षा
काठमाडौं, २७ वैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणका बेला जेड तहको सुरक्षा दिइने भएको छ । मोदीको नेपाल भ्रमणका समयमा पाँच प्रकारका सुरक्षा चुनौती औंल्याउँदै सरकारले यो तहको सुरक्षा दिने ...
चार अध्यादेश स्वीकृत
काठमाडौँ, २७ वैशाख । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ४ वटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्। तीमध्ये कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७५ र संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव ...
काठमाडौँ, २७ वैशाख । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भए पनि घोषितरूपमा पार्टी एकीकरणको मिति तय हुन सकेको छैन। दुवै पार्टीले अन्तिम तयारी पुगेको दाबी गरिरहँदा ...
ओलीको व्यबहारले झस्किए प्रचण्ड
काठमाडौं, २७ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बजेटसम्बन्धी छलफलमा बोलाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल झस्किए । सत्तासाझेदार दलका हैसियतले बजेटमा छलफल हुने अपेक्षा गरेका दाहाल ओलीको छलफलमा ...
काठमाडौं, २७ वैशाख । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंले ललितपुर र भक्तपुरका पनि धाराको पानी नमुना संकलन गरेको थियो । तीमध्ये ७० प्रतिशतमा हानिकारक जीवाणु भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । ...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा शुक्रकार आउँदै हुनुहुन्छ । भारतका कार्यकारी सरकार प्रमुखका रुपमा तेस्रो पटक हुन लागेको यो भ्रमणले आपसी आत्मीयता, मैत्री ...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्रबीच चाँडै पार्टी एकता हुने बताउनुभएको छ । वामपन्थी नेता स्व निर्मल लामाको १८ औँ स्मृति दिवसका अवसरमा ...
उत्तर कोरियाबारे ट्रम्प र आबेबीच टेलिफोन वार्ता
जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच उत्तर कोरियासँग हुने शिखर वार्ताका लागि लिने नीतिगत व्यवस्थाका बिषयमा बिहीबार टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ । आउदो हप्ता हुन लागेको अमेरिकी राष्ट्रपति ...
सप्तरी, २८ वैशाख । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका नियम तथा मापदण्ड अपनाउँदै आएको भए पनि सप्तरीमा भने पुरानै रबैया कायमै छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठयक्रम विकास केन्द्रको शैक्षिक सत्र २०७५ का ...
काठमाडाैं : काेरोना भाइरस संक्रमण भए–नभएको पुष्टि गर्न अछाममा क्वारेन्टाइनमा बसेका दुई सय जनाको थ्रोट स्वाब संकलन गरिएको छ । नेपाली सेनाका २ र सरकारले पठाएका तीन जना स्वास्थ्यकर्मीको संयुक्त टोलीले ...
काठमाडौं : कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को उद्गम स्थल चीनको हुबे प्रान्तस्थित वुहान सहरमा लगाइएको लकडाउन हटाइएको छ । स्मार्टफोनमा हुने व्यापक रुपमा प्रयोगमा आएको स्वास्थ्यसम्बन्धी एएमा ‘हरियो’ कोड देखिएकाहरुले जनवरी २३ तारिखयता पहिलोपटक ...
नेपाली सेनाका उच्च तहका अधिकारीहरुले राजीनामा दिने क्रम बढेको छ। सैनिक मुख्यालयका अनुसार यो वर्ष साउनदेखि पुससम्म मात्र ४९ जना उच्च अधिकारीहरुले राजीनामा दिएका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा जगदश्विर पाण्डेले लेखेका ...